CBD uye Skincare | CBD Misoro - Ko CBD yakachengeteka paganda rako here?
CBD uye Skincare - Ko CBD yakachengeteka paganda rako here?
CBD zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda zvinonyanya kufarirwa, uye musika uri kungokura kukura. Sekureva kwemushumo uchangobva kuitika, musika wepasi rose we CBD wekuchengetedza ganda unotarisirwa kurova $ 1.7 biriyoni ne2025. Sarah Mirsini anobva kuMĀSK ajoina kuti akurukure nezvekubatsira kwekuchengetedza ganda kweimwe CBD nemamwe ma cannabinoids.
RELATED POST: Kushambadzira Yako CBD Brand
RELATED POST: Kardashian CBD Vacheche Vanoratidzira Maksuru Akadzika Mvura Mako eCraze
CBD mafuta ave akakurumbira kwazvo zvekuti zvakachengeteka kutaura kuti iwe unogona kuiwana yakanyanya kunaka chero kupi uye mune chero fomu kana mharidzo, iwe yaunogona kufunga nezvayo. Ikozvino, yatora iyo indasitiri yekuchengetedza ganda zvakare. Kubva pamasikisi eCDD, maseramu, uye zvitanda, kusvika kuCDD yakashongedzwa, sunscreens uye vanochenesa, kune marudzi asingaperi ezvitoro zveCBD muzvitoro zvekushambadzira kwese kwese kutenderera nyika.
Musika wepasi rose we CBD zvizorwa musika uri inokosha kupfuura $ 580 mamiriyoni, uye United States ine huvepo hwakasimba mukati mayo. Inotarisirwa kurova $ 1.7 biriyoni ne2025, iyo CBD maitiro haisi kuenda chero nguva munguva pfupi. Kana iwe uri kufunga kuve mumwe wevakawanda veCBD based skincare fanatics, hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino indasitiri uye kuti ingabatsira sei ganda rako.
Chii chinonzi CBD Oil?
CBD oiri chinhu chemusikirwo chakatorwa kubva kuCannabis sativa indasitiri cannabis marudzi. Iyo ine zvakawanda zvakanaka mhedzisiro pamuviri wemunhu; ine akawanda kwazvo zvekuti pamwe hazvigoneke kuvapa mazita ese.
Cannabidiol kana CBD ndiyo isiri chinhu chinodhakisa mbanje kana hemp zvinomera, zvakabudiswa sehupfu, uye zvinowanzodyiwa seoiri inowedzera kushanda kwayo uye nekuita kwayo.
Iwe unogona kunge wakambonzwa nezveCDD zvisati zvaitika. Iyo inofungidzirwa kugadzirisa kusarara uye kurwadziwa kusingaperi, uye kubatsira kubvisa autoimmune hosha, kushushikana, uye kushushikana. Zvigadzirwa zveCDD zvakare mushonga unozivikanwa pakurwisa kushaya hope uye zvinobatsira kuwedzera immune system.
CBD haina tetrahydrocannabinol (THC) zvemukati, zvichireva kuti inoshaya mafungiro ekuchinja mbanje. CBD oiri haina kufanana neiri hemp mbeu yemafuta, kunyangwe iri chimwe chinhu chikuru cheganda, CBD oiri yakaiswa zvakanyanya mu cannabidiol.
Nei CBD ichishandiswa muzvigadzirwa zveganda?
CBD inonyatso kuzivikanwa nekuporeswa kwayo, ayo antioxidant uye anti-anogumbura mabhenefiti anorumbidzwa zvikuru uye anoonekwa seanobatsira pakurapa ganda kunetsekana nekuzvimba, kuoma, uye acne, nekuti inobatsira kudzikisa kugadzirwa kwe sebum, muganda.
Seyakanyanya kutaurwa nezvayo mabhenefiti, inoderedza kuzvimba, inogadzirisa kugadzirwa kwemafuta, uye inoregedza kukuvara kwakanyanya kwemahara. Inogona kuve inoshanda pakurapa eczema uye psoriasis zvakare.
Inokurudzirwa kune avo vane ganda rakatsva, rakakanganiswa uye seyakaomarara uye yakaoma ganda mhando, uye zvakare inozivikanwa kubatsira nerinokwegura ganda.
CBD ye Acne
Acne mamiriro ekuputira. Uye kunyangwe hazvo zvinhu zvakawanda zvichikonzera, chero chigadzirwa chaunoshandisa paganda rako chakachengeteka uye chinoderedza kuzvimba chingangoita pachena kudzikamisa kubuda.
Kutsvagurudza kunoratidza kuti CBD mafuta ine mukana wekudzora yakawandisa sebum kugadzirwa, izvo zvinozivikanwa zvakare kuti zvinakonzeresa acne
CBD Oiri yeMakwenzi
CBD oiri ine antioxidant zvivakwa, hapana kuvhunduka, rinobva pamuti. Aya antioxidants anobatsira kudzikisira zviratidzo zvinoonekwa zvekukwegura, aka makwinya kana kusviba kweganda.
CBD Oiri yeChinhu Chakanaka
CBD oiri yakawanikwa iine zvinhu zvinozorodza uye inogona kubatsira kudzikisira nyaya dzine chekuita nekunzwa kweganda, kusanganisira kutsvuka uye kuita zvekare.
CBD inobatsira kurwisa kutsamwa uye kuzvimba kunokonzerwa neeczema, pamwe neyakareba ganda mamiriro senge psoriasis uye dermatitis
Thanks kune Nzvimbo dzeCBD dzekunyorovesa, kusanganisira iyo mune yako ganda maitiro zvinogona kubatsira kurwisa kupera simba uye kuoma.
Disclaimer, isu tinonzwisisa hype nekuti CBD yakanaka kwazvo, asi usatenda zvese zvaunoverenga. Icho chichiri chimwe chezvinhu zvakawanda zvinobatsira ganda rako kuti rinzwe uye riratidzike zvirinani, musiyano mukuru pakati pezvimwe zvinoshandiswa neCBD ndewe: Mafuta eCDD akawana mukurumbira
Iko CBD mune zvigadzirwa zveganda zvakachengeteka paganda rangu here?
Zvigadzirwa zveCBD mune yako ganda zvinofanirwa kunge zvakachengeteka paganda rako, kana zvikaitika kuti une mhinduro kubva pachigadzirwa cheCDD, ingangove isiri iyo iyo CBD pachayo, asi chimwewo chinongedzo.
Kana uchisarudza zvigadzirwa zvako zvinochengeterwa ganda zvine CBD, yeuka iyo CBD inoshanda mushe nemishonga yekuwedzera iyo inodzikamisa uye inosimbisa chipingamupinyi cheganda, senge ceramides, hyaluronic acid, peptides, uye niacinamides. Edza kudzivirira zvigadzirwa zveganda reBDD zvine doro, sezvo izvi zvichikwanisa kurwisa mhedzisiro yaro uye nekukwiridzira mamiriro ekuputira eganda.
Iyo CBD yezvigadzirwa zveganda indasitiri ichiri indasitiri isina kukodzera, saka iwe unofanirwa kuve wakangwarira mune izvo zvigadzirwa zvaunotenga uye gara uchishandisa mabrandari akavimbika nezve izvo zvigadzirwa zvechigadzirwa chavo sezvo, pazviitiko zvakawanda, vamwe vanogona kunge vasina chokwadi chekuti CBD yavo yakavakirwa zvigadzirwa zvine CBD chaiyo kana kwete.
Ndizvo zviri pamutemo kutenga CBD zvigadzirwa zvemafuta mumatunhu ese makumi mashanu?
CBD ikozvino zviri pamutemo padanho remubatanidzwa. Zvigadzirwa zveCDD zvinogona kurimwa uye kutengeswa muhuwandu hwakawanda hweUS States, uye izvo zvinosanganisira zvese zveganda uye zvigadzirwa zvekunaka zvine CBD, futi.
Maererano 2018 Bhiri Bhiri, cannabinoids inotorwa kubva kumaindasitiri hemp, iine isingasviki 0.3% THC, zviri pamutemo, saka unogona kutenga zviri pamutemo zvigadzirwa zveganda reCDB kwese kwese muUnited States.
Ndeipi mhedzisiro inogona kugadzirwa neCBD yekuchengetedza ganda zvigadzirwa?
Kutanga kubva, hazvizokukwidziridze. Iye zvino kutaura zvakanyanya, CBD haina mhedzisiro inozivikanwa, asi nyanzvi zhinji navanachiremba vanobvuma kuti hapana tsvagiridzo yakakwana pamusoro pazvo kune vazhinji vema dermatologists kukurudzira zvigadzirwa zveCDD.
Zvigadzirwa zveCBDD hazvisi izvo chete zvigadzirwa zvine iyo nyaya, akawanda nyeredzi zvigadzirwa anotambura nekushayikwa kumwe kwekutsvagisa uye achiri zvigadzirwa zvekutenga zvakare.
Chii chekutarisa mune yako CBD Ganda Kuchengeta
Kune akawanda CBD zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda zviripo, uye kana iwe uchifarira kutsvaga yakanakisa CBD oiri, heano mamwe matipi ekusarudza yakanakisa CBD chigadzirwa cheganda rako:
Ita shuwa kuti yemhando yezvinhu inotaura fmira. Hemp mbeu yemafuta kana dhisiki haina kufanana neCDD mafuta. Kune zvigadzirwa zvinoti zvine CBD, iyo FDA yakati iro zita rinofanirwa kunge riri pane chinongedzo chinonzi cannabidiol, kana zvinyorwa zvemagetsi zvichitaura zvinhu Kunge CBD-yakafumiswa hemp mbeu yemafuta, pamwe haina chero CBD mafuta
Chiratidziro chakanaka chekuti chigadzirwa cheCDD chiri chepamutemo ndepaya pekuti iyo mhando inonyora yakazara cannabidiol zvemukati mumamirigiramu,
Tsvaga wechitatu-bato chitupa pane iyo yakachena uye yakatarwa huwandu hweiyo CBD kuve nechokwadi kuti uri kuwana izvo izvo zvinorehwa nechiratidzo.
Dzivisa zvirongo, mabhodhoro akajeka, kana chero kurongedza kunoisa chigadzirwa muchiedza chakawanda kana mweya, zvinoita kuti zvisanyanya kushanda.